Gudiga dastuurka oo dhaleecaynta ka daysay dawladda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Arkiv foto, Konstitutionsutskottet (KU), sawir: Sveriges Radio
Gudiga dastuurka oo dhaleecaynta ka daysay dawladda
Gudiga dastuurka: "Dawladda ayaa la raagtay sharciga ilaalista xuduudaha"
La daabacay tisdag 7 juni 2016 kl 10.24
Gudiga dastuurka oo baadhitaan ka sameeyay si ay dawladdu u xallisay qaxootiga faraha badan, ayaan wax dhaleecayn ah u gudbin dawladda Iswiidhan. Inta qudha ay dawladda ku haystaan ayaa ah in ay la raageen sharciga sheegaya in xuduudaha waddanka la ilaaliyo.
Gudigan ayaa muddo gaadhaysa dhowr bilood baadhaysay 40 ashkatooyin oo ka yimid xisbiyadda mucaaradka ee lugu magacaabo Alliansen. Xisbiyaddan ayaa dhaleecaynaya dawladda waddanka iyo sida ay u xalliyeen qaxootiga faraha badan ee waddanka soo gaadhay.
Galabta ayuu gudiga dastuurka shaacinaya baadhitaankan oo dhameystitran, hasayeeshe ayey warbixin soo gaadhay l´aanta Ekot sheegaysa in gudigani dhaleecaynta ka dhaafay dawladda.
Gudigan ayaa u jeeda in ay dawladdu markii ay xaaladu ugu atkeeyd dayrtii hore hawshoodi ka soo baxeen madama ay xidhiidh wanaagsan la haysteen heeyadaha waddanka, waa sida uu baadhitaanka maanta la shaacin doono sheegayo.
Hasayeeshe ayey dawladda hal shay ku haystaan, in ay la rageen sharciga sheegaya in xuduudaha waddanka la ilaaliyo. Gudigan ayaa u jeeda in ay dawladdu hal todobaad ka hor markii ay go´aanka sheegaya in xuduudaha la ilaaliyo qaadeen, u diyaar ahaayeen in ay sharcigan dhabeeyaan.
Sido kale in xidhiidhkii ka dhaxeeyay dawladda iyo heeyada socdaalka markii ay xaaladu ugu atkeeyd laga hayn caddeyn.
Gudiga dastuurka ayaan doonayn in ay midnaba dawladda amba dawladdi hore ee alliansen ku dhaleecayaan si ay qaxootiga u xalliyeen. Arrinkan ayey xisbiga Sverigedemokraterna ka soo hor jeedaan.
Dawladda ayaa heyadda xisaab hubinta qaranka ,Riksrevisionen, ku magacaabtay in ay sii baadhan hadii u gudigani si sax ah wax u baadhay.